Vaovao - Inona no Tokony ho Fantatrao Momba ny Tile Deck Composite
Ny fametahana hazo-plastika DIY andian-dahatsoratra mampiseho fomba tena tsara miaraka amina endrika kely, izay mety kokoa amin'ny paving ao an-tokotany na ny lavarangana.
Voalohany, andeha hojerentsika ny volan'ny vokatra:
Ireo dia vokatra tokana daholo. Ny DIY Tiles dia atambatra amin'ny fomba geometrika isan-karazany, ary ny lamina amin'ny zoro mitsivalana sy marindrano manamboatra ny loko, ny jiro ary ny aloka amin'ny fomba marina. Ny haben'ny vokatra dia 300 mm X 300 mm.
Mba hanehoana sary tena misy amin'ny vokatra vita amin'ny andiany DIY:
ny hazo-plastika DIY Ny series dia manana tombony miavaka amin'ny fametrahana tsotra, fandidiana haingana, tsy misy fepetra takiana sarotra, tsy mila mampiasa kojakoja fametrahana mahazatra, ary hitsitsy ny fotoana sy ny vidin'ny fametrahana.
Indraindray ny tany mila atsofoka dia tsy dia mahazatra loatra, io dia rehefa mampiseho ny talentany ireo vokatra DIY. Azonao atao ny mametraka ny gorodona araka ny sitrapony araka ny tena tany misy azy, ary ny tokontany dia voajanahary sy mahazo aina kokoa.
Ohatra, ity sary manaraka ity:
Ny andian-dahatsoratra vita amin'ny hazo-plastika DIY dia misy vokatra azo antoka, tsy misy triatra, tsy misy miady, ary mora kokoa amin'ny lalan-drano izy io ary manalavitra ny fanangonana rano aorian'ny orana.
Tsotra ihany koa ny fikojakojana aorian'ny fikojakojana, diovy fotsiny toy ny mahazatra, na ny ankizy aza dia mahazaka azy mora foana.
Ny plastika vita amin'ny hazo dia fitaovana fananganana noforonina avy amin'ny kofehy hazo sy plastika amin'ny ampahany iray. Izy io dia manana tombony amin'ny fanoherana ny harafesina, fanoherana ny rano, fanoherana slip, ary fanoherana fanoherana. Izy io no fitaovana fanaovana gorodona ety ivelany.